UJEREMIYA 23 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UJEREMIYA 23UJEREMIYA 23
231“Mawoo kubo abelusi abatshabalalisa imihlambi yedlelo lam!” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 2Utsho ke ngoko uNdikhoyo onguThixo kaSirayeli kwabo belusi ukuthi: “Ngenxa yokuba imihlambi yam niyichithe nayithi saa, anayikhathalela, ndiza kunohlwaya ngenxa yobubi enibenzileyo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 3“Amasalela omhlambi wam ndiya kuwaqokelela emazweni onke endawachitha-chithela kuwo, ndiwabuyisele edlelweni lawo, aqhame ande. 4Abantu bam ndiza kubanika abelusi abaza kubalondoloza. Abayi kube babe naxhala nalunxunguphalo, kungayi kube sabakho bani ulahlekayo kwakhona.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.
5“Iyeza imihla,” lowo ngumlomo kaNdikhoyo, “yokuba uDavide ndimvelisele kumnombo wakhe ihlumelo elililungisa: ukumkani oya kuphatha ngobulumko, enze okulungileyo nobulungisa kulo mhlaba. 6Ngemihla yakhe baya kuhlala bengabasindileyo abantu bakwaJuda, nakwaSirayeli bahlale bekhuselekile. Igama aya kubizwa ngalo lelithi: ‘UNdikhoyo ububulungisa bethu.’ ”Jer 33:14-16
7Ngoko ke nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Niyabona, kuza imihla apho abantu bangayi kubuya bathi xa befunga: ‘Ekho nje uNdikhoyo owakhulula amaSirayeli eJiputa.’ 8Ngaloo mihla baya kuthi: ‘Ekho nje uNdikhoyo owakhulula inzala yamaSirayeli kwilizwe langasentla nakuwo onke amazwe awabachitha-chitha kuwo, ukuze ahlale kwelakowawo ilizwe.’ ”
9Nalu udaba malunga *nabashumayeli:
Intliziyo yam ikhathazekile;
amathambo am anengevane.
Ngenxa *kaNdikhoyo namazwi akhe angcwele
ndifana nomntu onxilileyo oyotywe butywala.
10Lizele ngabantu abakrexezayo ilizwe,
libharhile ilizwe ngenxa yesiqalekiso sikaNdikhoyo,
amadlelo asentlango axwebile.
Bahamba iindlela ezigwenxa;
bangamagorha okwenza okungalunganga.
11“Kwa-abashumayeli nababingeleli abamhloneli uThixo;
nasendlwini yam ndibhaqa amanyundululu.”
Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.
12“Ngoko loo ndlela yabo iza kuba mtyibilizi,
balahleke bawe emnyameni.
Ndiza kubahlisela ishwangusha
ngethuba lokohlwaywa kwabo.”
13“Kubashumayeli baseSamariya ndibone into emanyumnyezi:
ndibone beshumayela ngoBhali,
belahlekisa abantu bam amaSirayeli.
14Kubashumayeli baseJerusalem ndibone eligqithileyo isikizi;
bona ngabakrexezi abaphila ngokuxoka.
Bakhuthaza abantu ekwenzeni ububi,
kungabikho namnye uguqukayo kwinkohlakalo yakhe.
Xa bebonke kum bafana nabantu baseSodom;
abemi balapho bafana nabaseGomora.ZiQalo 18:20”
15Ke naku akuthethayo uSomandla-onke uNdikhoyo
ngokusingisele kubashumayeli baseJerusalem:
“Ndiza kubanika ukutya okukrakrayo,
ndibaseze amanzi anetyhefu,
kuba abashumayeli baseJerusalem basasaze ukudela uThixo kulo lonke ilizwe.”
16Utsho uNdikhoyo uSomandla-onke ukuthi:
“Ze ningayiphulaphuli into ethethwa kuni ngaba bashumayeli;
Banixelela ngemibono yeentliziyo zabo,
benganazisi okuphuma emlonyeni kaNdikhoyo.
17Kwabalidelayo ilizwi lam basoloko besithi: ‘Makube luxolo kuni.’
Kwabo baqaqadekileyo bathi: ‘Anisoze nihlelwe bububi.’ ”
18Ngubani na kubo olilungu legqugula likaNdikhoyo?
Ingubani oluvayo noluqondayo udaba lwakhe?
Ngaba ukho owakha waluphulaphula waluthathela ingqalelo?
19Niyabona, kuphuma kuNdikhoyo ulophu,
nditsho isaqhwithi esoyikekayo
esivuthuza phezu kweentloko zabangendawo.
20Lo msindo kaNdikhoyo awuyi kujika ade abe ukufezekisile oko akucebileyo entliziyweni yakhe.
Kwimihla ezayo niya kuyiqonda kakuhle le ndawo.
21Abathunywanga ndim aba bashumayeli,
kodwa noko basuke bagijima.
Zange ndithethe nabo,
kodwa bona basuke bashumayela.
22Ukuba bebekho kwigqugula lam ngebewavakalisa amazwi am endiwabhekisa ebantwini bam.
Ngebebajikile kwiindlela zabo ezimbi
nakwizenzo zabo ezikhohlakeleyo.
23“NdinguThixo wakufuphi na?”
utsho umlomo kaNdikhoyo,
“ndingabi nguThixo wakude na?
24Ikhona na indawo efihlakeleyo apho umntu angazimela khona ukuze ndingamboni?”
“Asindim na lowo ukho ngokupheleleyo ezulwini nasemhlabeni?”
25“Ndiyivile into ethethwa ngâbo bashumayeli bashumayela ubuxoki egameni lam. Bathi: ‘Ndiphuphe iphupha! Ndiphuphe iphupha!’ 26Koda kube nini na iqhubeka le nto eyenziwa ngabashumayeli abashumayela ubuxoki, bevakalisa inkohliso yeengcinga zabo? 27Bacinga ukuba la maphupha bawachazayo aya kwenza ukuba bandilibale abantu bam, baxele ooyise-mkhulu abândilibalayo banqula uBhali. 28Umshumayeli ongumchazi-maphupha makatsho ukuba uchaza nje iphupha, kodwa lowo ushumayela evakalisa amazwi am makenjenjalo ngentembeko. Ufunani umququ engqoloweni?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 29“Alinjengomlilo na ilizwi lam, lingenjengehamile na eyaphula ilitye lenyengane?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.
30Nguwo lo ke umlomo kaNdikhoyo: “Ndibachasile abo bashumayeli abeba omnye komnye amazwi angathi ngawam. 31Ndibachasile kwanabo bashumayeli bashumayela ngobabo ubuciko, suka bathi: ‘Utsho uNdikhoyo.’ ” 32Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Niyabona, ndibachasile abo bashumayela ubuxoki bamaphupha abo. Bayawachaza, baze balahlekise abantu bam ngokuzigwagwisa kwabo. Abathunywanga ndim, yaye bengagunyaziswanga ndim. Futhi akukho nto konke babanceda ngayo aba bantu.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.
33“Xa aba bantu bekubuzayo, nokuba *ngumshumayeli nokuba ngumbingeleli, besithi: ‘Udaba olundilisekileyo *lukaNdikhoyo luthini?’ uze uthi: ‘UngumthwaloNgesiHebhere umthwalo nodaba olundilisekileyo ligama elinye wena kuNdikhoyo; ibe uza kukothula.’ ” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 34“Xa kukho umntu, nokuba ngumshumayeli, nokuba ngumbingeleli, othi xa ethetha: ‘Nalu udabaNgesiHebhere umthwalo nodaba olundilisekileyo ligama elinye lukaNdikhoyo,’ loo mntu uya kohlwaywa kunye nentsapho yakhe.
35“Nisoloko nibuza kubahlobo nakwizizalwane nisithi: ‘Impendulo kaNdikhoyo ithini? Uthini uNdikhoyo?’ 36Kambe maningabi sawasebenzisa amazwi athi: ‘Nalu udaba olundilisekileyo lukaNdikhoyo,’ kuba ilizwi lomntu ngamnye losuka libe ludaba olundilisekileyo lukaNdikhoyo kuye, abe ewagqwetha amazwi kaThixo onguThixo wethu ophilayo, uNdikhoyo uSomandla-onke. 37Nibuza kubashumayeli nisithi: ‘Itheni impendulo kaNdikhoyo? Utheni uNdikhoyo?’ 38Ukuba nithi: ‘Nalu udaba olundilisekileyo lukaNdikhoyo,’ ndibe mna bendithe ze ningabi sawathetha amazwi athi: ‘Nalu udaba lukaNdikhoyo,’ 39ngako oko, niyabona, ndiza kunithatha ndiniphose kude lee kunye neso sixeko senu ndasinika ookhokho benu. 40Ndonihlisela ihlazo elingenasiphelo nokuphoxeka okungasokuze kulibaleke.”